သင် ရွှေတိဂုံ ဘုရားရောက်ဖြစ်ပြီး သတိထားမိချင်မှ ထားမိမဲ့ အရာလေးတွေ - 9style
Home/အထွေထွေဗဟုသုတ/သင် ရွှေတိဂုံ ဘုရားရောက်ဖြစ်ပြီး သတိထားမိချင်မှ ထားမိမဲ့ အရာလေးတွေ
TjrxgWfzULaCgCdvDE October 17, 2018
29,0032minutes read
သင် ရွှေတိဂုံ ဘုရားရောက်ဖြစ်ပြီး သတိထားမိချင်မှ ထားမိမဲ့ အရာလေးတွေကို စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင် သတိမထားမိသေးဘူး ဆိုရင် နောက်တစ်ခေါက် ဘုရားကိုရောက်ရင် သတိထားကြည့်လိုက်ပါ ။ မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ပြောပြပေးလိုက်ပါအုံး ။
ပထမဦးဆုံး တင်ပြပေးချင်တာကတော့ ဘိုးဘိုးအောင် ဂူဘုရားပါ ။ အံဖွယ် ၉ ခုမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ပါ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ ဘုရားတည်ရှိပုံပါ။ ဘုရားဆင်းတုတော်က ဘိုးဘိုးအောင်ဂူဘုရား တန်ဆောင်းရဲ့ နံရံကိုကပ်ပြီး အထဲက ဂူထဲမှာပါ။ ဒါဆို ဘုရားဆင်းတုတော်က တန်ဆောင်း နောက်က စေတီတော်ရဲ့အလယ်တည့်တည့် ကိုရောက်နေတာပါ။ နောက်ပြီး ရွှေတိဂုံစေတီ တော်ရဲ့ ဌာပနာ တိုက်ကိုဝင်လို့ရတဲ့ အပေါက်ကဘုရားဘေးမှာရှိပြီး အခုတော့ ပိတ်ထားလိုက်ပြီ လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကိုသင်သိပြီး ပြီလား ။
ဒီတခါ ဘုရားက တရုတ်ဘုံကျောင်းလေးတစ်ခုကို ပြချင်ပါတယ် ။ စနေ ဂြိုလ်တိုင်ရှေ့က ကျောက်စိမ်း ဘုရားနားမှာလည်းတစ်ခုရှိပါတယ် ။ အခုပုံထဲက ဘုံကျောင်းဘုရားလေးကတော့ မြောက်ဘက်မုခ်က မြန်မာပြည် သုကကာရီ တန်ဆောင်းအနောက်မှာပါ ။ တရုတ်လိုတွေတော့ ရေးထားတယ် ဘာလဲတော့ ကျွန်တော်လဲ မသိဘူး ။ သတိမထားမိသေးဘူးဆိုရင် ရောက်ရင် သွားကြည့်လိုက်ပါအုံး ။
ဒါကတော့ လောကပါလ သိုက်ဘုရား ပါ။ တနင်္ဂနွေ ဂြိုလ်ထောင့် ရှေ့က သာယာဝတီ မင်းခေါင်းလောင်းတော်ကြီး ဘေးနားမှာ ရှိပါတယ်။ ဘီလူးသိုက်ဆက်များလှူဒါန်းတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အဓိဌာန် အောင်တယ်လို့ လူသိများတဲ့ ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။
စနေထောင့် ရှေ့တည့်တည့်က CMA တန်ဆောင်း (ကျောက်စိမ်း ဘုရား) အနောက်ဘက်ရှိ ဝိဇ္ဇာရုပ်တု လေးတစ်ခုက လက်ဝါးတစ်ဖက်ကိုဖြန့်ထားပြီး အခုလို မှိုင်နေလေရဲ့ ။ ဘာလို့လဲတော့ ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူး ။
၅။ ဓမ္မစေတီ ကျောက်စာနှင့် ခေါင်းတော်နေရာ
ဒါကတော့ ဓမ္မစေတီ ကျောက်စာနှင့် ခေါင်းတော်နေရာ အကြောင်းပါ။ ၁၅ ရာစု က ဓမ္မစေတီမင်းခေါင်းလောင်းတော်နှင့်အတူ လျှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကျောက်စာကို ယနေ့ အရှေ့မြောက်ထောင့် တွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်ကိုတွေ့နိုင်သလို (ပုံ ၁) ၊ ယခင်မူလနေရာတွင် ပုံစံတူအသစ် တစ်ခုထားရှိကာ
(ပုံ ၂) ၊ ၎င်း၏ ဘေးနေရာ အရှေ့ဘက်စောင်းတန်းဘေး အလယ်ပစ္စယံတွင် ၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ်စားရေးဆရာ တစ်ချို့၏ ရေးသားထားသောစာအုပ်များ နှင့် ယခင် ဇရပ်ဟောင်းများ ပြုပြင်ရာတွင် ခေါင်းလောင်းတော် ထားရှိခဲ့သည်ဟု ယူဆရသော စတုဂံ ပုံအုပ်ဘောင်တွေ့ရှိခြင်း ၊ စသည်တို့ကြောင့် ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းအား သန်လျှင်မြို့စားမှ ၍နေရာမှ ယူဆောင်သွားသည်ဟု ခန့်မှန်းရ၍ ယနေ့ဤနေရာအားခေါင်းလောင်းတော်အတွက် ချန်လှပ် ထားပါသည်။(ပုံ ၃)
၆။ သွေးဆေး ကန် နှင့် သွေး ဆေးကန်
သွေးဆေးကန် ဟုဆိုလိုက်တာနဲ့ ရွှေတိဂုံ ဘုရားမြောက်ဘက်မုဒ် ကို သတိပြုမိမှာပါ။ ကျွန်တော် ဒီနေရာကိုစရောက်ချိန် မှာလေ့လာမိတော့ သွေးဆေးကန် အကြောင်းအရာက နှစ်ခုဖြစ်နေတယ် ။ နောက်ဆုံးသိလိုက်ရတာက ကန်က နှစ်ကန် မို့ သမိုင်းကနှစ်ခု ပါ။
ပုံ ၁. သွေးဆေး ကန်
ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးကို စတင်တည်ချိန် ဥကလာပမင်းကြီးနှင်တကွ လုပ်အားပေး ပြည်သူပြည်သားများမှာ ပင်ပမ်း၍ အားအင်ကုန်ခန်း မူးဝေ ကြသည်ကို မြင်သော သိကြားမင်း က သောက်ရေကန်အတွင်းသို့ တန်ခို့ဖြင့် ဆေးထည့်ပေးလိုက်သောအခါ ကန်အတွင်းရှိရေများသည် သွေးဆေးကဲ့ သို့ နီမြန်းပြီး သောက်သုံးသူ လူအများကို အားအင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုး စေပါတယ် ။ ဒါကိုအစွဲပြုပြီး သွေးဆေး ကန်ဟု ယနေ့တိုင်ခေါ်တွင်ခဲ့တာပါ ။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်ရွှေတိဂုံ ဘုရားကြီးဘက်စုံပြုပြင်မွန်းမံချိန် ၎င်းသွေးဆေးကန်ကို ပြန်လည်တူးဖော်ရာ သွေးဆေးကဲ့သို့ နီမြန်းသော ကျောက်တုံးတစ်တုံး ရရှိခဲ့ သဖြင့် ရွှေတိဂုံဘုရားပြတိုက်အောက်ထပ်မှာ ယနေ့တိုင် သိမ်းဆည်းထားပါသည်။
ပုံ ၂. သွေး ဆေးကန်
ဒီကန်ကြီးကတော့ အင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲတုန်းက ပေခဲ့သောသွေးကို ထိုကန်တွင် ဆေးကြောခြင်းကြောင့် ခေါ်ဝေါ်သည်ဟု လူသိများပါသည်။
မိတ်ဆွေသိထားတဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားက ထူးခြားတဲ့နေရာလေးတွေရှိရင် ပြန်လည် မျှဝေသွားပါဦး
ရေးသားသူ – Tuta Manaw May
ဓာတ်ပုံ – Tuta Manaw May
credit – thutazone.ne
ဒါကတော့ ဓမ်မစတေီ ကြောကျစာနှငျ့ ခေါငျးတျောနရော အကွောငျးပါ။ ၁၅ ရာစု က ဓမ်မစတေီမငျးခေါငျးလောငျးတျောနှငျ့အတူ လြှူဒါနျးခဲ့တဲ့ ကြောကျစာကို ယနေ့ အရှမွေ့ောကျထောငျ့ တှငျထိနျးသိမျးထားသညျကိုတှနေို့ငျသလို (ပုံ ၁) ၊ ယခငျမူလနရောတှငျ ပုံစံတူအသဈ တဈခုထားရှိကာ
(ပုံ ၂) ၊ ၎င်းငျး၏ ဘေးနရော အရှဘေ့ကျစောငျးတနျးဘေး အလယျပစ်စယံတှငျ ၊ အင်ျဂလိပျခတျေစားရေးဆရာ တဈခြို့၏ ရေးသားထားသောစာအုပျမြား နှငျ့ ယခငျ ဇရပျဟောငျးမြား ပွုပွငျရာတှငျ ခေါငျးလောငျးတျော ထားရှိခဲ့သညျဟု ယူဆရသော စတုဂံ ပုံအုပျဘောငျတှရှေိ့ခွငျး ၊ စသညျတို့ကွောငျ့ ဓမ်မစတေီခေါငျးလောငျးအား သနျလြှငျမွို့စားမှ ၍နရောမှ ယူဆောငျသှားသညျဟု ခနျ့မှနျးရ၍ ယနေ့ဤနရောအားခေါငျးလောငျးတျောအတှကျ ခနျြလှပျ ထားပါသညျ။(ပုံ ၃)
ရှတေိဂုံဘုရားကွီးကို စတငျတညျခြိနျ ဥကလာပမငျးကွီးနှငျတကှ လုပျအားပေး ပွညျသူပွညျသားမြားမှာ ပငျပမျး၍ အားအငျကုနျခနျး မူးဝေ ကွသညျကို မွငျသော သိကွားမငျး က သောကျရကေနျအတှငျးသို့ တနျခို့ဖွငျ့ ဆေးထညျ့ပေးလိုကျသောအခါ ကနျအတှငျးရှိရမြေားသညျ သှေးဆေးကဲ့ သို့ နီမွနျးပွီး သောကျသုံးသူ လူအမြားကို အားအငျပွနျလညျပွညျ့ဖွိုး စပေါတယျ ။ ဒါကိုအစှဲပွုပွီး သှေးဆေး ကနျဟု ယနတေို့ငျချေါတှငျခဲ့တာပါ ။ ၁၉၉၅ ခုနှဈရှတေိဂုံ ဘုရားကွီးဘကျစုံပွုပွငျမှနျးမံခြိနျ ၎င်းငျးသှေးဆေးကနျကို ပွနျလညျတူးဖျောရာ သှေးဆေးကဲ့သို့ နီမွနျးသော ကြောကျတုံးတဈတုံး ရရှိခဲ့ သဖွငျ့ ရှတေိဂုံဘုရားပွတိုကျအောကျထပျမှာ ယနတေို့ငျ သိမျးဆညျးထားပါသညျ။
မကျြစိဝဒေနာရှငျမြားအတှကျ အမရေိကနျနိုငျငံမှ အခမဲ့မကျြစိအထူးကုလယောဉျကွီး မန်တလေးသို့ရောကျရှိနလေို့ အမွနျဆုံး ဆကျသှယျစာရငျးပေးလိုကျကွပါနျော။
မှိုဟင်းတစ်ခွက်အတွက် အသက်တွေ မဆုံးရှုံးစေဖို့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များမှိုဟင်းတစ်ခွက်အတွက် အသက်တွေ မဆုံးရှုံးစေဖို့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ
တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ ကိုယ်တိုင်ချီးကျူးခံရတဲ့ မြန်မာတစ်ယောက်ရဲ့အလှူဒါန